Raha iny mipetraka iny,
Ka mitodika ny lasa ;
Lasa ihany ny eritreritra,
Mamisavisa ny fahiny.
Ny tontolo sy ny kinasa,
Ny olana tsy mety ritra.
Rehefa sendra mamindra iny,
Lavidavitra ny lalana aleha ;
Mitamberina ao an-tsaina,
Ireo kiana, fanomezan-tsiny.
Totoafo isaky izay mandeha ;
Tena nankalemy fo sy saina.
Rehefa tonga ny fotoana,
Hangalana ny torimaso ;
Lasa ho azy ny fisainana,
Mibanjina ny manoloana,
Mitodika ny tsy taza-maso.
Izany tokoa ve ny fiainana.
Maro ny lalana nodiavina ;
Tao ny mora tao ny sarotra,
Ny nisosa sy ny namahatra,
Ny niiba tsy hita ho lavina,
Ny niabo toa nasalotra,
Izany tokoa ve no lahatra.
Efa nivalona daholo izany.
Lasa tsy nimpody intsony.
Lasa nisy fa tsy nampino.
Lasa anefa fa tsy fanadino.
Lasa nijanona ampitan'ny ony.
Leson'ny fiainana daholo izany.
Sokajy : embona, Eritreritra mandalo, Fahatsiarovana, fiainana
Date de dernière mise à jour : Mer 27 fév 2019